ဘုရား ရဲ့ တန်းခိုးတော်ကြောင့် ရေဘယ်လောက် ကြီးကြီး ဘုရားကျောင်းတော် ကို ရေမမြှုတ်တဲ့ ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ဘုရား ရဲ့ တန်းခိုးတော်ကြောင့် ရေဘယ်လောက် ကြီးကြီး ဘုရားကျောင်းတော် ကို ရေမမြှုတ်တဲ့ ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား
ဘုရား ရဲ့ တန်းခိုးတော်ကြောင့် ရေဘယ်လောက် ကြီးကြီး ဘုရားကျောင်းတော် ကို ရေမမြှုတ်တဲ့ ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား
4.8.2020 မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့ ရေလယ်ဆံတော်ရှင် မြတ်ဘုရား ရေဘယ်လောက် ကြီးကြီး ဘုရားကျောင်းတော်ကို ရေမမြုတ် ဒယ်အိုး ပုံစံဖြင့် ဝန်းရံ ကန်တော့လျှက်ပါ ဘုရား၏ တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဘေးရန်ကင်း၍ အေးငြိမ်ကြပါစေဒီနေ့ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ။ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရား. တကယ်လို့များ လိုင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ဆုံခဲ့ရင် သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ကာလိုရာဆုတောင်းပီး ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါ…။
ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းနိုင်ကြပြီး ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးမှလဲ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေဗျားးးး။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့‌လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
4.8.2020 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ ေရလယ္ဆံေတာ္ရွင္ ျမတ္ဘုရား ေရဘယ္ေလာက္ ႀကီးႀကီး ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကို ေရမျမဳတ္ ဒယ္အိုး ပုံစံျဖင့္ ဝန္းရံ ကန္ေတာ့လွ်က္ပါ ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေဘးရန္ကင္း၍ ေအးၿငိမ္ၾကပါေစဒီေန႔႐ိုက္တဲ့ ဓာတ္ပုံေလး ။ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား.
တကယ္လို႔မ်ား လိုင္းဖြင့္ခ်ိန္နဲ႔ဆုံခဲ့ရင္ သာဓုသုံးႀကိမ္ေခၚကာလိုရာဆုေတာင္းပီး ျပန္လည္မွ်ေဝ လိုက္ပါ…။
ဘုရားရွင္ရဲ႕တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ကမာၻသူ ကမာၻသားအားလုံး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏိုင္ၾကၿပီး ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးမွလဲ အျမန္ဆုံး ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစဗ်ားးးး။
အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔‌ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ၂၀၂၁နှစ်အစ မှာဘဲ အောင်ဘာလေထီဆု နှစ်ဆုပေါက်ခဲ့တာကြောင့်အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်
Next post စာ တစ်နာရီ ဖတ်ရင် ငွေ(၁၀၀၀) ပေးတဲ့အပြင် ကော်ဖီ နဲ့ မုန့်ပါ ကျွေးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က နေရာ တစ်နေရာ..